I-china See-Thru / Two-Way Mirror ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
I-Acrylic Two-Way Mirror, kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-see-through, ukubhekwa, isibuko esibonakalayo noma sendlela eyodwa. Lesi sibuko esikhethekile sikuvumela ukuthi usibone lapho usakhombisa ukukhanya emuva. Ngokuqapha, izinhlelo zokusebenza ezikhethekile, iDhua See-Thru / Two Way Acrylic Mirror ukukhetha okuhle.
• Kutholakala kumashidi we-1220 * 915mm / 1220 * 1830mm / 1220x2440mm
• Itholakala ngombala
• Usayizi ngokwezifiso nobukhulu nakho kuyatholakala
I-Acrylic See-Through Mirror, Bheka-Thru/ Tmaye-Way Miphutha Ai-crylic Sheet
I-Acrylic Two-Way Mirror, kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-see-through, ukubhekwa, isibuko esibonakalayo noma sendlela eyodwa. A ezimbili esibukweni acrylic ishidi yakhelwe ngefilimu engacacisi ku-acrylic, ivumela inani elincane lesigameko ukuthi likhanye likhanye okusele. Njengawo wonke ama-acrylics, leli shidi lingasikwa kalula, lakheke futhi lenziwe.
Igama lomkhiqizo I-Acrylic See-Through Mirror, Bheka-Thru / Izindlela Ezimbili Zesibuko Ishidi Le-Acrylic
Umbala Sula noma umbala
Usayizi 1220 * 915mm, 1220 * 1830mm, 1220 * 2440mm, ukusika ngokwezifiso usayizi
Isicelo Ukuqapha, ukuphepha, ukuvalwa kwezilwane
Izindlela ezimbili noma bheka-thru izibuko ze-acrylic ube nezinhlobonhlobo zezicelo nezinzuzo. Nazi ezinye zezindlela zokufaka amashidi amabili wesibuko se-acrylic ebhizinisini lakho noma ekhaya.
Izindlela ezi-2 ze-acrylic mirror sheet
i-acrylic 2 indlela yesibuko
acrylic 2 indlela isibuko ishidi
isibuko se-acrylic ngezindlela ezimbili
i-acrylic isibuko sokubuka
acrylic ezimbili indlela esibukweni
acrylic ezimbili indlela mirror sheet
isibuko sendlela ezimbili
izindlela ezimbili zesibuko se-acrylic